Izithuthi zombane azihambelani nesantya kwaye uLucid Motors uyangqina | Iindaba zeGajethi
Izithuthi zombane aziphikisani nesantya kwaye uLucid Motors uyakungqina oko
Kwicandelo lezithuthi zombane, uTesla uye waba ngumlinganiso kunye nemodeli eza kulandelwa yiyo nayiphi na inkampani efuna ukubeka intloko yayo kweli candelo. Ngapha koko, uTesla ngokwakhe wakhupha uthotho lweepatent kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuze nayiphi na inkampani ikwazi ukuzisebenzisa simahla sqala ukuvelisa izithuthi zombane ngokuzimela okufanelekileyo, njengeemodeli ezenziwa ngu-Elon Musk.
Kodwa izithuthi zombane akufuneki ziphikisane nesantya. Ngombulelo kwimoto yombane, ukukhawulezisa okufezekisiweyo ngamanye amaxesha kukhulu kakhulu kunoko sinokukufumana kwisithuthi somlilo. Namhlanje, imodeli yeTesla S sesona sithuthi sombane sikhawulezayo kwihlabathi, Ukufikelela kwi-100 km / h kwimizuzwana eyi-2,7. Kodwa ayinguye yedwa.
I-Lucid Motors ngomnye wabavelisi ababhejayo kwizithuthi zombane kodwa bejolise kwicandelo lokunethezeka, njengesiphelo esiphakamileyo sikaTesla, umvelisi oceba ukwazisa ngalenyanga isithuthi sokuqala sombane esifikelelekayo, iModeli 3. uLucid Air, ngumzekelo wenkampani yeLucid Motor, iprototype enayo Amandla e-1000 hp kunye noluhlu lweekhilomitha ezingama-640 lukwazile ukufikelela kwiikhilomitha ezingama-378 / ngeyureOku ukuba kukususa isantya esisikiweyo esele siphunyezwe ngabo bonke abavelisi kangangexesha elithile, umda ongavumeli ukudlula kwiikhilomitha ezingama-250 / ngeyure.
Ngelixa lo mzekelo uza kuthengiswa ngenye imini, uLucid Motors uceba ukumilisela isithuthi sombane sokuqala ngowama-2019, isithuthi esinamandla angama-400 hp kunye neendawo ezikufutshane neekhilomitha ezingama-400. Ukuba une- $ 52.500, phinda kabini ixabiso lokuqala leModeli 3, ngoku unokuyigcina.
Njengabanye abavelisi abafikelela kwintengiso yezithuthi zombane, Basenendlela ende ekufuneka beyihambile ukuba bafuna ukuma ngeTesla, Umenzi oqale ukudala olu hlobo lwezithuthi eziphezulu ukuze ekugqibeleni asungule isibonelelo kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali. Ukongeza, isiqinisekiso sokuba uTesla unokusinika kwihlabathi liphela ikwayindawo yokuthatha ingqalelo kweli candelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izithuthi zombane aziphikisani nesantya kwaye uLucid Motors uyakungqina oko
Nokuba zingakanani iimoto zombane abazikhuphileyo, ukuba abathobi amaxabiso kwaye babeke iindawo zokutshaja ezixekweni, akukho nto inokwenziwa.
Intsomi ye-IBM Model F iyathengiswa kwakhona